कभर स्टोरी Archives - Page2of2- बडिमालिका खबर
एजेन्सी : अहिले धेरैले चश्मा लगाउने गर्दछन् । कतिले आँखाको सुरक्षाका लागि त कतिले आँखा नै कमजोर भएका कारण चश्मा लगाउने गर्दछन् । कतिपयले फेशनका लागिपनि चस्मा लगाउने गरेका छन् । यो बीचमा चश्मा लगाउनेहरुलाई लिएर एक गम्भीर खुलासा भएको छ । लण्डनमा गरिएको एक अध्ययनले चश्मा लगाउने मानिसलाई एक्लोपन तथा डिप्रेशनको खतरा बढी हुने […]
एजेन्सी । अहिले बर्षा सुरु भएको छ । यो समय सर्पको बिगविगी उच्च छ । कहाँ कतिबेला सर्पले टोक्ने हो कुनै पत्तो छैन । बर्षेनी सर्पले टोकेर धेरै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । हामीले केही कुरा जानिराखियो भने त्यो जीवनदान बन्नसक्छ । अरुलाई जानकारी दिएमापनि त्यो जीवन दान बराबर हुनेछ । आज हामी कुरा गर्दैछौ […]
सामान्यताः महिनावारी भएको समयमा तल्लो पेटमा दुखाइ हुनु सामान्य नै मानिन्छ । तर, कुनै महिलालाई हरेक महिना महिनावारीको समयमा अत्यधिक दुखाइ हुने गर्छ । कुनै महिलाहरु महिनावारीको समयमा दुखाई र रगत बगेको कारण ओछ्यानमा नै पर्छन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले भर्खरै एउटा अनुसन्धानबाट महिनावारीको समयमा आउने विभिन्न समस्याका कारण हरेक महिलाले वर्षमा ९ दिन काम गर्न नसक्ने […]
भारतीय कम्पनीका औषधि परीक्षणमा फेल, बजारबाट तुरुन्त फिर्ता लग्न निर्देशन
काठमाडौ । नमूना परीक्षणका क्रममा गुणस्तर न्युन पाइएपछि औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा गईसकेका ८ प्रकारका औषधिहरु रिकल (बजारबाट तुरुन्त फिर्ता) गर्न सम्वन्धित औषधि उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ । विभागको निर्देशन पाउनेहरुमा छ वटा नेपाली कम्पनी छन् भने २ वटा भारतीय कम्पनी छन् । विभागका अनुसार नेपाल फर्मास्यूटिकल्स लेब्रोटरी बीरगञ्जले उत्पादन गरेको LPN-74165 Formin -GI forte, […]
काठमाडौ, असार २४ गते । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले सोमबार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको बिषयमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा,स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादव , गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राई ,स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव राम थपलिया थिए । उक्त […]
एजेन्सी । प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको […]
१४८ रोगहरूको औषधी हो गाईको गहुँत,रुसका वैज्ञानिकको अनुसन्धानबाट पुष्टि
गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटुरोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका हुन् […]
अरेबियन महिलाहरुको सौन्दर्य रहस्य
सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ । हुनपनि बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव रसिलो ओंठ आदिले उनीहरुको सौन्दर्य खुल्ने गर्छ । सवैले स्विकारेका छन् कि, अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ । […]
दुर्गम गाँउमा निशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिबिर
बडिमालिका समचार असार, १८ बाजुरा स्वास्थ्य कार्यलय बाजुराले बाजुराका दुर्गम गाँउमा निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर गरेको छ । स्वास्थ्यको पहुँच, गर्भवति महिलालाईको चेकजाँच, पाठेघर खस्ने सम्बन्धि निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यलय बाजुराका परिवार नियोजन सुपर भाइजर सुर्य बिष्टले वताएका छन् । जिल्लाका स्वाकिकार्तिक खापर, जगन्नाथ, हिमाली, खप्तडछेडेदह गाँउपालिमा बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर […]
भित्री बस्त्र कस्तो लगाउने ?
हामी भित्री पहिरन अर्थात इनर वेयरमा त्यती ध्यान दिने गर्दैनौ, जति बाहिरी आवरणमा दिने गर्छौ । बाहिरी लुगाफाटो छनौटमा हामी निकै ध्यान दिने गर्छौं । कस्तो रंग लगाउने, कुन साइजको लगाउने ? डिजाइन वा स्टाइल कस्तो लगाउने ? भित्री लुगा भने जस्तोसुकै भएपनि काम चल्छ । हामीलाई यस्तै लाग्छ । भित्री लुगा कसैले देख्दैनन् । […]
हरेक मान्छेभित्र एउटा ‘सुन्दर मान्छे’
एउटा ढुंगालाई हेर्नुहोस् । तपाईंको आँखाले त्यसलाई फगत ढुंगा देख्छ । तर, एक कालिगढले त्यो ढुंगामा सुन्दर आकृति देख्छ । हुनपनि हरेक ढुंगामा सुन्दर आकृति हुन्छ । कालिगढले छिनो र हतौडाले जब उक्त ढुंगाको अनावश्यक भागहरु टुक्र्याउँदै हटाउँछन्, तब सुन्दर आकृति बाँकी रहन्छ । ठिक यसैगरी एउटा खुला क्यानभासमा चित्ताकर्षक चित्र हुन्छ । कुनैपनि चित्रकारले […]